ခိုင်သင်းကြည်တို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့အိမ်ထောင်သက် ၁၆ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်
24 Apr 2018 . 11:25 AM
သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည် နဲ့ ကိုခန့်နိုင် တို့ရဲ့ အိမ်ထောင်သက်တမ်း ၁၆ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ လက်ဆောင် ဝယ်ပေးတာ လေးကို မခိုင်လေးက သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ တင်ရင်းအမှတ်တရ စကားလေးတွေကို လည်းအခုလိုရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည် လက်ဆောင်
“ 💝Today is our 16th anniversary, my love! 💝 ၁၆နှစ်ပြည့်ပြီးချစ်သူသက်တမ်း၈နှစ်ပေါင်းလို့ ၂၄နှစ်ပြည့်ခဲ့တာတောင်အရင်တုန်းကလိုချစ်နေဆဲဘဲဆိုတာယုံပါတယ်လို့” ဆိုပြီးရေးသားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကိုခန့်နိုင်နဲ့ သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည် တို့ အရင်ကပုံ
ကိုခန့်နိုင်နဲ့ သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည် တို့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေး
သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည် နဲ့ ကိုခန့်နိုင်တို့ ဟာ သမီးလေးဖြစ်သူစံထိပ်ထားနဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝ လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မခိုင်လေးတို့ မိသားစု ဘဝ လေး ဒီထက်မက ပိုပြီး ချစ်ခင်နိုင်ကြပါစေ လို့ အခရာမှလည်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Photo Credit:Khine Thin Kyi Facebook
ခိုငျသငျးကွညျတို့ဇနီးမောငျနှံရဲ့အိမျထောငျသကျ ၁၆ နှဈပွညျ့ အထိမျးအမှတျ
သရုပျဆောငျ ခိုငျသငျးကွညျ နဲ့ ကိုခနျ့နိုငျ တို့ရဲ့ အိမျထောငျသကျတမျး ၁၆ နှဈပွညျ့ အထိမျးအမှတျအနနေဲ့ လကျဆောငျ ဝယျပေးတာ လေးကို မခိုငျလေးက သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျပျေါမှာ တငျရငျးအမှတျတရ စကားလေးတှကေို လညျးအခုလိုရေးသားထားတာတှရေ့ပါတယျ။
မင်ျဂလာ နှဈပတျလညျ လကျဆောငျ
“ 💝Today is our 16th anniversary, my love! 💝 ၁၆နှဈပွညျ့ပွီးခဈြသူသကျတမျး၈နှဈပေါငျးလို့၂၄နှဈပွညျ့ခဲ့တာတောငျအရငျတုနျးကလိုခဈြနဆေဲဘဲဆိုတာယုံပါတယျလို့ ” ဆိုပွီးရေးသားထားတာလညျးဖွဈပါတယျ။
ကိုခနျ့နိုငျနဲ့ သရုပျဆောငျ ခိုငျသငျးကွညျ တို့ အရငျကပုံ
ကိုခနျ့နိုငျနဲ့ သရုပျဆောငျ ခိုငျသငျးကွညျ တို့ ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ မိသားစုလေး
သရုပျဆောငျ ခိုငျသငျးကွညျ နဲ့ ကိုခနျ့နိုငျတို့ ဟာ သမီးလေးဖွဈသူစံထိပျထားနဲ့ ပြျောရှငျတဲ့ မိသားစုဘဝ လေးကို ပိုငျဆိုငျထားကွပွီ ဖွဈပါတယျ။ မခိုငျလေးတို့ မိသားစု ဘဝ လေး ဒီထကျမက ပိုပွီး ခဈြခငျနိုငျကွပါစေ လို့ အခရာမှလညျး ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။